‘हाउसफूल ४’र ‘पोइ पर्‍यो काले’को चेपुवामा ‘बादशाह जुट’, बक्स अफिसमा टिक्न सकेन
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन फिल्मी‘हाउसफूल ४’र ‘पोइ पर्‍यो काले’को चेपुवामा ‘बादशाह जुट’, बक्स अफिसमा टिक्न सकेन
विराटनगर, २१ कात्तिक । चर्चित अभिनेता सुशील श्रेष्ठ अभिनित फिल्म ‘बादशाह जुट’ बक्स अफिसमा असफल भएको छ । गत शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘बादशाह जुट’ बाट दुई निर्माता हर्क बहादुर कुँवर र भोजराज श्रेष्ठको लगानी डुबेको छ ।
डेढ करोडको आसपासमा निर्माण भएको फिल्मले निर्माताको लगानी सुरिक्षत गर्नुभन्दा पनि प्रचार प्रसारमा सकाएको पैसा पनि उठाउन मुश्किल पर्ने देखिएको छ । फिल्म अहिले सम्म केही हलमा चलिरहेको भएपनि फिल्म हेर्ने दर्शक भने निकै नै कम छन् । फिल्मलाई मल्टीप्लेक्समा बलिउड फिल्म ‘हाउसफुल ४’ र सिंगल थिएटरमा दुई नेपाली फिल्म ‘छ माया छपक्कै र पोइ पर्‍यो काले’ को चेपुवामा परेको कारणले केही समय पनि टिक्न दिएन ।
फिल्मको ‘वर्ड अफ माउथ’ बलियो नभएको कारणले पनि फिल्म हेर्ने केही दर्शकहरूले कथावस्तु र कलाकारको तारिफ गरेका छैनन् । जोनीकै कथा तथा निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘बादशाह जुट’मा आफूले आफूलाई बादशाह सम्झने दुई युवकको कथालाई देखाएको छ ।
फिल्ममा अभिनेता सुशील, आमिर गौतम, रोशीका खड्का, केइसा रावतका साथ रश्मी तामाङ, रोविन तामाङ, दीपक क्षेत्री, कमलमणि नेपालीलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा सुशील पत्रकार र आमिर पुलिस अफिसरको भूमिकामा छन् । दीर्घ खड्काले सम्पादन गरेको फिल्ममा लेराजु कार्कीको डिओपी, उत्तम हुमागाईंको छायांकन, राजकुमार उप्रेतीको द्वन्द्व निर्देशन, कृष्ण भारद्धाज, कोशिस क्षेत्री र मोहित मुनालको संगीत रहेको छ ।
एच एण्ड बि फिल्मस् प्रा.लि. र गोल्डेन ग्रेप्स फिल्मस् एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. को संयुक्त व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको अतिथी भूमिकामा रहेको छ । ‘बादशाह जुट’ बाट अभिनेता सुशील श्रेष्ठलाई निकै ठूलो आश थियो तर, फिल्मको असफलतासँगै सुशीलले आफ्नो फिल्मी करियरमा फ्लप फिल्मको ह्याट्रिक गरेका छन् ।